Dawladda Djibouti Oo Sheegtay Inay La Yaabtay Wakhtiga Lagu Beegay Heshiiska Saddex Geesoodka Ah Ee Berbera – | Baligubadlemedia.com
Dawladda Djibouti Oo Sheegtay Inay La Yaabtay Wakhtiga Lagu Beegay Heshiiska Saddex Geesoodka Ah Ee Berbera –
Danjire Idiris, oo u waramay wargeyska Capital ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ee Itoobiya, wuxuu ugu horayn yidhi “Xidhiidh wanaagsan ayaa ka dhexeeya Itoobiya iyo Djibouti wakhti badan ayaanay soo wada mareen. Sidaas darteed, warwar kama qabo arrintan [Heshiiska dekedda Berbera] xaqiiqdiina in dekedo badan uu gobalku yeesho waa wax u wanaagsan bulshadeena bariga Afrika. Waa wax wanaagsan dekedaha Berbera iyo Kenya in la horumariyo. Marka la garab dhigo kuwa galbeedka Afrika, waa dekedo tiro yar Djiboutina afka uma wada dhigan karto malaayiin koontiinar sannadkii, sidaas daraadeed waa wax wanaagsan waanan shaqayn karnaa dhammaantayo Djibouti, Berbera iyo Lamu. uma arkaayo tartan aan wanaagsan.”
Safiirka ayaa la weydiiyay bal malihiisa ku saabsan heshiiska dekedda Berbera iyo saamiga ay Itoobiya ka iibgsatay maalgashiga Berbera oo ay DP world gacanta ku hayso iyo khatarta ka soo waajihi karta, waxaanu safiirku yidhi “Maya. Djibouti iyo Itoobiya muddo dheer ayay is yaqaaneen, wakhtiyo wanaagsan iyo kuwo adagna waanu soo wada marnay, sidaas daraadeed arrintani ma qasi karto xidhiidhka dhinacyada badan, iyadoo aanu arrintan oo keliya ku salaysnayn xidhiidhkayagu. Wada jir ayaanu uga shaqaynaa arrimo badan oo aan mid ka mid ah ka magacaabi karto oo ah ammaanka iyo nabadgelyada. Wada jir ayaanu u dagaalanaa, wada jir ayaanan isku meel ugu dhimanaa, markaas xataa beri haddii uu hoggaamiye cusubi yimaado, maaha wax uu dib u celin karo sababtoo ah xidhiidhkayagu wuu adagyahay, markaas ma jiro wax laga warwaraa.”
Safiirka oo hadalkiisa sii wataa wuxuu yidhi “Itoobiya waa dal u madaxbanaan inuu heshiisyo saxeexo waxaanan u aragnaa wax caadi ah oo la mid ah sidaanu annaguba u madaxbanaanahay. Waxa naga yaabiyay waxa weeye wakhtiga go’aankan [heshiiska saddex geesoodka ah]. Markii aanu joojinay xidhiidhkayagii DP world, Itoobiya heshiis ayay iyaga [DP world] la saxeexatay. Laakiin annaga heshiiskani sinaba dhib naguma hayo. Mar labaad Itoobiya waa dal madaxbanaan arrintania ma qasi doonto xidhiidhkayaga. Wada xaajoodkuna wuxuu bilaabmay laba sannadood ka hor oo waanu ogayn.”
Safiirka ayuu mar kale wargeysku weydiiyay bal inuu dhib ku keeni karo Djibouti heshiiskani maadaama oo ay Itoobiya 90% shixnadeeda kala soo degto Djibouti, haddana saami ka heshay dekedda Berbera ee Somaliland, wuxuuna safiirku sheegay inuu aaminsanyahay inaanu heshiiskan saddex geesoodka ahi marna dhib ganacsi ku keenayn Djibouti, waxaanu xusay in yoolka Djibouti yahay dalalka ka baxsan Itoobiya ee aan dekedaha lahayn inay u adeegto “Markaas haddii istaraatajiyadu sidaas tahay oo aanu fulino, nama qasayaan tartanka dekedaha kale.” ayuu yidhi.